September 2019 – Sonic Generation
ကျွန်တော်တို့တတွေပာာ ရှင်သန်ဖို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ လူပေါင်းများစွာနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံကြရပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်တွေကိုလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပြီးစီးအောင် အလျင်အမြန် လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေက မှန်နိုင်ပါ့မလား???
သင့်ဘဝမှာ အသက်လေးနှစ်ထိ စကားမပြောတတ်သေးလို့
အနေတယ် လို့ လူအများ ထင်ခံရဖူးပါသလား—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
Forex & Gold Trading B++ Couese
Forex & Gold Trading B++ Couese (Ygn) တစ်ခု အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပြန်ပေါ့။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဂျက်ကီချမ်း၏ အောင်မြင်ရေး နည်းလမ်းများ
ကွန်ဖူးသိုင်းကွက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝ စိတ်အာရုံတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျက်ကီချန်းပာာ လွန်စွာ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ ဖြစ်ပါတယ်—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
Good Result လေးပါ။
Passion + Method. မှန်တော့ Success ဆိုတဲ့ Result ထွက်လာတာပေါ့။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်ဖူး၊ စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖူးကြတော့ မိတ်ဆွေတို့လည်း အတော်လေး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိကြမှာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်ဖူး၊ စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖူးကြတော့ မိတ်ဆွေတို့လည်း အတော်လေး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိကြမှာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်ဖူး၊ စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖူးကြတော့ မိတ်ဆွေတို့လည်း အတော်လေး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိကြမှာပါအသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
နောင်မှ ရသည့် နောင်တ
ငါ…..အဲ့တုန်းက အဲ့လို လုပ်လိုက်ရမှာ—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
“ယုံကြည်ခြင်းက တောင်တွေကိုတောင် ရွှေ့နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို မိတ်ဆွေကြားဖူးပါသလား၊—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဘဝမှာ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံး အချိန်၊ အဆိုးတွေနဲ့ပဲ ကြုံ တွေ့ရတဲ့အချိန်
ဒီလိုအချိန်ကို လူတိုင်းကြုံ တွေ့ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။
ဒီလိုအချိန်တွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့သူတွေက အောင်မြင်ကျော်ကြား
တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာပြီး မဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေကတော့
သာမန်လူအဖြစ်နဲ့သာ ဘဝနိဂုံး ချု ပ်သွားတတ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ဟာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျနေတဲ့
အချိန်ပါ။ သူ့လုပ်ငန်းတွေ အားလုံးအရှုံးပေါ်နေပြီး ဒေဝါလီ ခံရတော့မယ့်
ဒါပေမယ့် သူဟာ လက်မြှောက်အရှုံးပေးခြင်း မပြု ပါဘူး။
စိတ်ဓာတ်ကျ ၊ အားငယ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်လို နေထိုင်ပြု မူခြင်းလည်း မလုပ်ပါဘူး။ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပဲ အခြေအနေဆိုးကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြို းစားပါတယ်။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
Total Website Visits: 306892